प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण कुनै सम्झौता नहुने – Rajdhani Daily
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण कुनै सम्झौता नहुने
भ्रमण टोली १२ सदस्यीय हुने
विधुर ढकाल / राजधानी
काठमाडौं, ७ चैत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा कुनै पनि सन्धि–सम्झौता नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ चीनमा नहुने हुँदा सन्धि–सम्झौता पनि नहुने भएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा ‘प्रोटोकल’ नमिल्ने हुँदा कुनै पनि सन्धि–सम्झौता हुनेछैन । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसमेत चीन नहुने हुँदा विदेश मन्त्रालयस्तरमा समेत सम्झौता नहुने भएको हो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनले अगाडि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)’ परियोजनासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा जाँदै छन् । ‘प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता भए पनि प्रोटोकल नमिल्दा कुनै पनि सम्झौता हुनेछैनन्,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमण औपचारिक रूपमा चीन जाने र आउने मात्र हुनेछ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धि भएको थियो । अहिलेसम्म सो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा सो सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने बताइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल बोआओ सम्मेलनमा सहभागी हुन १० चैतमा चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्री सीसँगै केही विदेशी नेताहरूसँग समेत भेटावार्ता गर्नेछन् । त्यस्तै, सम्मेलनमा विश्वका आर्थिक नेतृत्वहरूको उपस्थिति हुने हुँदा त्यसको फाइदा उठाउँदै व्यवसायी तथा उद्योगीहरूसँग समेत भेट गर्ने सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन भ्रमणमा जाने १२ सदस्यीय टोली तय गरेको छ । टोलीमा प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँगै परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीसमेत सहभागी हुनेछन् । त्यस्तै, टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना सचिवसमेत सहभागी हुनेछन् ।
के हो बोआओ फोरम ?
चीनको हेनान प्रान्तको बोआओमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो संगठन सरकारी, व्यावसायिक तथा बुद्धिजीवीहरूको गैरनाफामूलक संस्था हो । सन् १९९८ मा फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति फिडेल रामोस, अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री बब होक र जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री मारिहिरो होसोकावाको अग्रसरतामा फोरमको सुरुवात भएको हो । औपचारिक रूपमा सन् २००१ को फेब्रुअरीमा गठन भएको हो । चीनले गठन गरेको यो फोरममा एसियाका २७ र अस्ट्रेलियासहित २७ देशका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । यसको पहिलो सम्मेलन २००२ को १२–१३ अप्रिलमा भएको थियो । फोरमका एसिया क्षेत्रको आर्थिक, विकास, साझेदारी, समाज र वातावरणको क्षेत्रमा छलफल हुने गर्दछ ।
यस वर्ष २३–२६ मार्चमा बोआओमा हुने सम्मेलनको उद्घाटन २५ मार्चमा हुनेछ । ‘ग्लोबलाइजेसन एन्ड फ्रि ट्रेड ः दि एसियन प्रस्पेक्टिभ’ नारासहित हुने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
सम्मेलनमा बेल्ट एन्ड रोडको विषयमा मन्त्रीस्तरीय छलफल तथा राजनीतिक नेतृत्वस्तरमा बहस हुनेछ । त्यस्तै, २१औं शताब्दीको सिल्क रोड, विज्ञान प्रविधि, शिक्षा खुला अर्थतन्त्र, बे्रक्सिट र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, राष्ट्रिय निर्वाचनपछिको अमेरिकालगायतका विषयमा ४४ वटा सत्रमा छलफल हुनेछन् ।
May 2018 (1437)